Imibono eyisihlanu ye-Social Media yamabhizinisi | Martech Zone
I 5 Social Media Imibono eyiphutha yamabhizinisi
ULwesihlanu, May 16, 2014 ISonto, May 25, 2014 Douglas Karr
Muva nje, ngangixoxwa nabuzwa ukuthi yiziphi izinkampani ezenza imibono engafanele lapho zakha futhi zisebenzisa isu labo lezokuxhumana. Okuhlangenwe nakho kwami ​​kungahle kuphikisane nezifundiswa eziningi laphaya, kepha - ngakho konke ukwethembeka - ngicabanga ukuthi le mboni ekugcineni ikhulile futhi imiphumela iyazikhulumela.
Inkulumo-ze ye-Social Media # 1: I-Social Media iyisiteshi Sezokumaketha
Izinkampani zivame ukubheka imithombo yezokuxhumana ngokuyinhloko njenge- isiteshi sokumaketha. Imithombo yezokuxhumana i isiteshi sokuxhumana engasetshenziselwa ukumaketha - kepha akusona isiteshi sokumaketha kuphela. Into yokuqala izinkampani ezingena kuyo lapho zingena ezinkundleni zokuxhumana ngokuvamile ziyisikhalazo - futhi manje zidinga ukusixazulula ngempumelelo kwazise umhlaba ubhekile. Izinkundla zokuxhumana yilokho abalaleli abakulindele yize inkampani yakho ibheka ukuthi isiteshi sisebenza kanjani kufanele isetshenziswe. Ukungaphenduli kulezi zicelo kuzobhubhisa noma yiliphi isu lokumaketha ezokuxhum owalihlelile.
Umbono mbumbulu weSocial Media # 2: Ukubuyiselwa Kotshalo-mali Kufanele Kusheshe Futhi Kukalwe Kalula
Izinkampani zifuna ukukala ukusebenza bese zibuyela ekutshalweni kwemali ezinkundleni zokuxhumana nge njalo nge-tweet noma nge-update. Kufana nokukala impumelelo yebhendi ngemuva kokushaya isigqi sokuqala. Imbuyiselo yakho yemidiya yezenhlalo ekutshalweni kwemali ingalinganiswa kuphela ngemuva kokuthi ulethe inani ezilalelini, lezo zilaleli (ukulalela) ziba umphakathi (owabelana), futhi wakha igunya nokwethemba embonini yakho. Ngamanye amagama, kufanele wenze umculo omnandi ngaphambi kokulindela ukubuya! Futhi, ukubuya ezinkundleni zokuxhumana kukhula ngokuhamba kwesikhathi - kwakha umfutho njengoba uheha izethameli zakho futhi wakhe umphakathi oqala ukunanela umyalezo wakho. Le bhulogi ineminyaka eyishumi ubudala futhi kuphela eminyakeni engu-5 edlule lapho imali ikhule yaze yafika eqophelweni lokwakha ibhizinisi elizungezile.
Umbono oyiphutha weSocial Media # 3: Ukumaketha Kufanele Kubhekane Nezindaba Zomphakathi
Lokhu kuphathelene ne- # 1, kepha izinkampani zivame ukukhawulela imiyalezo yezokuxhumana emnyangweni wezokumaketha, okuvamise ukuthi ayikulungele ukuphendula. Ukumaketha kuvame ukugqama ekuphawuleni nasekuhambiseni imiyalezo - kepha hhayi ekuphenduleni. I-Customer Service, i-Public Relations kanye nabasebenzi be-Sales bayizinsizakusebenza enkampanini yakho abafaka amathemba nabezindaba nsuku zonke, balalele futhi baphendule ukukhathazeka, futhi baqonde ukuthi ungabhekana kanjani nokuphikisana. Ukufaka isu elihle kakhulu lezokuxhumana kufanele kufaka laba basebenzi ngenkathi ukumaketha kusiza ukwenza imiyalezo, ukuqapha nokwabelana esiteshini, nokukala umthelela.
Umbono oyiphutha weSocial Media # 4: I-Social Media Mishaps yizinkampani eziqeda amandla
Izinkampani zikholelwa ukuthi imiyalezo yazo ezinkundleni zokuxhumana kufanele iphelele, ngaphandle kwamaphutha. Usuku nosuku, isonto nesonto, nenyanga nenyanga sibona lezi zibonelo ezinhle zokuthi izinkampani zenze kanjani okuthile izazi zezokuxhumana ezizibiza ngezinhlekelele zokuxhumana. Kungaba amaphutha, kepha akuvamile ukuthi kube izinhlekelele. Uma ubheka wonke amaphutha amangalisayo ezinkundleni zokuxhumana yizinkampani, iningi lalinalo AKUKHO mthelela ekuthengisweni, emanani entengo, noma enzuzweni. Izinkampani zingenza amaphutha ngokuphelele futhi zilulame ngokuphelele kuzo. Eqinisweni, sibonile lapho ukunanela kwamaphutha kuvame ukukhulisa ukuthengisa kwenkampani kwazise iziteshi zezindaba nezinye izindawo zokuxhumana zenanela lolu daba ngaphezu kwalokho ukukhangisa okungakhokha. Isu liza ekuxazululeni iphutha futhi ukululama kungaba usizo olukhulu ebhizinisini njengoba kwakha ukwethembana nobuqiniso nezethameli.
Inkulumo-ze ye-Social Media # 5: I-Social Media Imahhala
Ukuthola, ukukora, ukushicilela, ukuphendula nokwazisa umkhiqizo wakho ezinkundleni zokuxhumana ayikhululekile. Eqinisweni, uma wenza umsebenzi omubi, kungaba ukuchitha isikhathi namandla amaningi enkampanini yakho. Kungakubiza ukuthengisa esikhundleni sokwenza empeleni. Ngasohlangothini lweplatifomu, iziteshi zokuxhumana zenhlalo ezinjenge-Facebook, i-Twitter, ne-Pinterest zidudulwa kanzima ngabatshalizimali bazo ukwenza inzuzo… ngakho-ke amandla okukhuthazwa komyalezo wakho ezinkundleni zokuxhumana ngaphandle kokuthenga izethameli ezithile ancipha nsuku zonke. Ukusungula amabhajethi nezinsizakusebenza zokuthola, ukuphatha, ukushicilela nokuphendula ezinkundleni zokuxhumana ukukhulisa ukufinyelela kwakho kubalulekile.
Ngiyavuma noma awuvumelani? Yimiphi eminye imibono eyiphutha okholelwa ukuthi ikhona lapho?
Tags: amaphuthaamaphutha ebhizinisiamaphutha ezokuxhumana nabantu kwezamabhizinisikhululaimibono eyiphuthaokubiAmaphuthaumthwalo wemfaneloamaphutha ezinkundleni zokuxhumanaisu lokuxhumana kwezenhlalo
Izibalo ezingama-25 zokumaketha kwamaselula zonyaka wezi-2014 ezibalulekile
May 20, 2014 ku-9: 32 PM
Izinkampani eziningi zikholelwa ukuthi impumelelo yezokuxhumana nabantu ingakhiwa ngosuku. Abakhangisi kufanele njalo banikeze imininingwane efanelekile futhi bakhe igama lenkampani yabo ukwakha ubudlelwano obuhlala isikhathi eside namakhasimende abo ukuze babone imiphumela engcono emkhankasweni wabo wezokuxhumana.